]Onye nrụpụta akụrụngwa eze, aka eze | YAYIDA
YAYIDA Dental Medical Company pụrụ iche na nnukwu ọsọ na obere ọsọ eze handpiece na mmepụta akụkụ.
Mpempe aka eze
Mpempe aka eze dị elu
Mpempe aka eze dị ala
Akụkụ aka mapụtara eze
Ìhè nke eze
Ngalaba X-ray eze
]Onye nrụpụta akụrụngwa eze
YAYIDA - Ọkachamara akụrụngwa eze na-emepụta maka mpempe akwụkwọ eze, oche eze na ọkụ ọkụ eze kemgbe 2006
Ọpụrụiche n'ọsọ eze dị elu yana obere aka na-agba ọsọ dị ala.
YAYIDA Dental Portable 1:1 16:1 1:5 contra angle jiri nwayọ na-agba ọsọ mpempe aka Electric moto LED brushless electric micro mo
]1. Electric Motor Wide nso nke ọsọ mgbanwe ọrụ.Dabere na ngwa a, enwere ike ịhazigharị ọsọ site na 100 ruo 200,000 rpm na mkpịsị aka eze dị iche iche!2. Electric Motor Lightweight na kọmpat na elu torque.Ergonomically emebere maka ogologo na ịdị arọ iji belata ike ọgwụgwụ n'oge ogologo oge ọrụ. Enwere ike ịgba ọgwụ mgbochi ahụ site na autoclaving!
YAYIDA Dental Ultrasonic Scaler Ndụmọdụ iji mee ka oge nyocha Endodontics maka Woodpecker Ems Satelec DTE
]1. Emepụtara site na High-Quality Medical Grade igwe anaghị agba nchara.2. Ọkwa dị elu nke ziri ezi na mgbanwe mgbe ị na-eduzi usoro nlekọta ahụike3. Ọkwa dị elu nke Aesthetic na Corrosion Resistance.
YUIDA eze Ịgwọ Ìhè Optical Fiber Guide Atụmatụ Glass
]1. Dị ka ngwa dị iche iche si dị, na nhazi ezi uche na nrụpụta siri ike, site na iji teknụzụ dị elu, anyị nwere ike ịnye ngwaahịa fiber optical dị iche iche, na transmissivity nke karịa 56% kwa mita.2. Mere nke elu transperent eriri na ígwè.3. Autoclavable maka iji ugboro ugboro.
YAYIDA Dental Lab Micro Motor STRONG 90 +102S Handpiece 35000rpm Portable Micro Motor
]1. Ngwunye manicure na-eji kọmpat na ígwè njikwa ike na-arụ ọrụ na-aga n'ihu / ntụgharị, na-edozi ọsọ ntụgharị, usoro maka mfe na ngwa ngwa ngbanwe nke ibe n'ibe, ọ na-atụkwasị obi na-edozi onye na-egbutu n'ọnụ, na-egbochi ya ịtụgharị n'oge. ọrụ.2. Ihe aka na-egwupụta ihe nwere ikuku pụrụ iche maka ime ka micromotor dị jụụ, iji zere ikpo ọkụ ma jide n'aka na ọ na-arụ ọrụ.3. Slim imewe ígwè nozzle maka njide zuru oke. Akpa aka na-agụnye 4 bearings nke na-eme ka ịma jijiji efu na njedebe zuru oke maka ịhazi elu efere ntu ahụ nke ọma.
Ụlọ ọrụ YAYIDA nwere otu onye na-anụ ọkụ n'obi nke ahịa na ọrụ ire ere. N'otu oge ahụ, nye otu nkwụsị ịzụ ahịa.
Ụlọ ọrụ ahụ siri ọnwụ "Ịdị mma mbụ, ọrụ mbụ". Na-esi ọnwụ na akụrụngwa, ngwa ọrụ, ihe ndozi na nha, iji gbalịsie ike ime ka ngwaahịa anyị bịaruo nso otu ngwaahịa kacha mma n'ụwa.
Company mejuputa mmepụta nke ISO13485, na-ekwusi ike na-emepụta ọzọ mba ngwaahịa. Na anyị na-enye OEM/ODM ọrụ.
Ewezuga ọmarịcha anyị na azụmaahịa ODM.
Anyị ebugolarị ọtụtụ narị ngwaahịa anyị.
]Ntụkwasị obi ịdị mma
A na-enyocha ọrụ ọ bụla anyị na-arụ maka mmesi obi ike.
]YAYIDA eze ụlọ ọrụ pụrụ iche na elu na-agba na ala ọsọ eze handpiece, nnyocha na mmepe ọhụrụ ikwu eze akụkụ na ngwaahịa.
Ụlọ ọrụ YAYIDA nwere ụdị dị iche iche NomuRADS igwe si Japan, nwere ike izute ndị ahịa dị iche iche nkenke machining ọrụ.N'ihi na ndị ahịa pụrụ iche ngwaahịa, anyị na-esi ọnwụ na ọ dịghị ọha na eze na-adịghị ere ndị ọzọ ahịa, na-a pụrụ ịdabere na enterprise.
Anyị hụrụ ndụ n'anya, anyị na-ahụkwa ụlọ ọrụ eze n'anya. Anyị na-atụ anya na ngwaahịa eze anyị nwere ike ime ka ndị dọkịta na ndị ọrịa 'olileanya na-emezu n'ụzọ dị mfe karị ---- Mee ka ezé dị mma.
Company mejuputa mmepụta nke ISO13485, na-ekwusi ike na-emepụta ọzọ mba ngwaahịa.
Igwe ọkụ eze dị elu dị elu AYD-SLCM4
]Ndị enyi anyị na-abịa ileta ụlọ ọrụ anyị, na-achọ ime ka led elu ọsọ handpiece ịtụ na obere ọsọ handpiece iji. Ha nwere obi ụtọ na mpempe akwụkwọ eze anyị na ọrụ anyị. Anyị ji n'aka na ọ ga-adị ogologo oge mmekọrịta. Afọ ojuju ndị ahịa ga-abụ ihe mkpali anyị, anyị ga-anọgide na-emeziwanye ogo na ọrụ.
]Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ, detara anyị akwụkwọ